Cunto la qeexo | Cuntada Nutri
Maalmaha aan la kulanno, waxaa jira waxa aan u naqaanno "cibaadada jirkaDad badan ayaa ka walwalsan jimicsigooda, sida ay u muuqdaan, inta ay miisaan yihiin iyo inta dufankooda ay leeyihiin. Waxaa jira dad badan oo doonaya inay yeeshaan muuqaal qeexan oo soo jiidasho leh.
Lahaanshaha jir adag, midab leh oo aan lahayn dufan urursan waa fikrad aad u muuqata dad badan, markaa waxaan kuu sheegi doonnaa waxay yihiin talooyinka ugu fiican inaad qaadatid cunto si aad u qeexdo iyo maxay yihiin furayaasha la raacayo.
Waxaa jira cunooyin dufan leh oo naga caawiya qeexida muruqyadeena, hadii aan si sax ah u raacno waxaan gaari karnaa jirka aan dooneyno, in kastoo aan ku sii socon doonno howlaheena caadiga ah layliyo si loo dhawaaqo loona qeexo murqaha.
1 Astaamaha lagu garto cuntada si loo qeexo
1.1 Tilmaamaha aasaasiga ah ee maskaxda lagu hayo
2 Cunto si loo qeexo loona gubo baruurta
2.2 Cunto fudud ayaa loo ogol yahay
2.3 Cuntada iyo cashada
Astaamaha lagu garto cuntada si loo qeexo
Ciyaartoy badan ayaa isku arkaa xaalad cakiran oo ah inay doonayaan inay qeexaan jirkooda, si ay uga takhalusaan dufanka ku ururay meelaha qaarkood iyaga oo aan ka quusan mugga murqaha iyo xooggooda. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la sameeyo hagitaan nafaqo leh oo hagaagsan si aysan taasi u dhicin.
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay in la baabi'iyo dufanka oo la qeexo murqaha, waa inaad ku guuleysataa isku dheelitirnaan wanaagsan inta u dhexeysa qaadashada karbohaydraytyada iyo borotiinnada.
Tilmaamaha aasaasiga ah ee maskaxda lagu hayo
Waa in la fahmo in si loo fuliyo waxqabad jireed oo ku filan, karbohaydraytyada ay tahay in la qaato si jidhku tamar u helo iyo dhis muruqyadaSi kastaba ha noqotee, haddii aan ka badinno qaadashada karbohaydraytka, waxaan sababi doonnaa halkii jidhkeennu tamar uga heli lahaa dufanka, wuxuu ka heli lahaa oo keliya kaarbohaydraytyada, waa inaan ku bixinnaa cabirkeeda saxda ah.
Marka xigta, waxaan kuu sheegeynaa maxay yihiin furayaasha dufanka gubanaya oo aan lumin muruqa.
Qaadashada kaloriintaada iyo kharashka tamartaada, waa in dheellitiran. Haddii aad ku bixiso tamar ka badan inta aad ku darsato cuntada, jirkaagu wuxuu isticmaali doonaa dufan, taas oo ku habboon. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku dhaafto karbohidraat, ma awoodi doontid inaad gubto baruurta.
Isticmaal karbohaydraytyo gaabis ah, wuxuu yareeyaa jiritaankiisa inta udhaxeysa 5% iyo 10%.
Cun 5 jeer maalintii qaddar dhexdhexaad ah. Waa inaadan dheerayn adigoon cunin wax cunto ah, sidaa darteed habkaaga dheef-shiid kiimikaad wuxuu noqon doonaa mid firfircoon.
Ha ka tagin borotiinkaMarkaad raadineyso inaad gubto dufanka oo aad qeexdo murqaha, borotiinku wuxuu muhiim u yahay ilaalinta unugyada muruqyada oo wanaagsan.
Iska yaree qaadashada dufanka, ha tirtirin, laakiin cun cuntooyinkaas hodanka ku ah asiidh dufan leh oo caafimaad qaba, sida lowska ama avocados. Saliidda qumbaha ama saliid saytuun ah oo aan bikro ahayn.
Ha iloobin inaad biyo siiso. Haddii aad tahay ciyaartoy waa inaad si fiican u waraabisaa jimicsi kasta ka dib, waxay ku habboon tahay muruqyada iyo xubnaha inay soo kabtaan oo ay nafaqooyinka ka helaan dhiigga aad uga fiican. Intaa waxaa dheer, waxaad gacan ka geysan doontaa baabi'inta dufanka iyo sunta.
Cunto si loo qeexo loona gubo baruurta
Cunto aan ka helno internetka waa inaan loo qaadanin qiime ahaan, waa inay ahaato mid shakhsi ahaaneed waana in lala qabsadaa ujeeddooyinka, baahiyaha iyo jidhka qof kasta. Sababtaas awgeed, waxaan kuu soo bandhigeynaa cuntooyinka qaarkood, suxuunta si aad fikrad aasaasi ah uga hesho sida qeexitaanka cunnadu u ekaan doono.
Halkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa quraacda "caadiga ah" ay noqon karaan si aad u abaabuli karto heerkaaga qeexidda murqaha iyo dufanka oo yaraada.
Badarka oo dhans of oats giringiriyey ama higgaad, caano dufan leh.
Gabal midho xilliyeed ah: oranji, kiwi, moos, tufaax, iwm.
Ukunta, waxaa la doorbidaa in la qaato wax badan nadiif ah marka loo eego jaalladaha, sidaas darteed, inaad yeelato quraac isku dhafan oo ah laba cadaan iyo hal jaallo ah ayaa habboon.
Yogurt dabiiciga ah leh berry cas.
Kafee madow ama caano aan dufan lahayn.
Cunto fudud ayaa loo ogol yahay
Qaado faleebo reexaanta, fennel, chamomile, iwm.
Casiirka miraha dabiiciga ah, oo loogu talagalay kahor tababarka.
Jeex rooti lagama maarmaan saliid saytuun ah iyo yaanyo, sausage dufankiisu hooseeyo, turkey, tuna tuna dabiici ah ama jiis cusub oo la shiilay.
Baarka miraha oo dhan.
Khudrad dabiici ah iyo kuwa guriga lagu kariyo iyo khudradda khudradda.
Cuntada iyo cashada
Kaarboohaydraytyada, baastada iyo bariiska tiro dhexdhexaad ah, oo aan ka badnayn 100 garaam. Ku habboon ayaa ah in la qaato 75 garaam oo cunto ah.
Proteinas: naaska digaaga ama hilibka cad ee caatada ah.
Kaluun la dubay ama la dubay.
Suxuunta dhinaceeda iyo koorsooyinka koowaad: Maraq qudaar ama kareem, saladhyada, khudradda la shiilay, khudradda duban, broccoli, khudradda la kariyey ama uumiga ah, iwm.
Sidaad u aragto, tani maahan cunto caadi ah, maadaama sidaan soo sheegnay aan ku siino tilmaamo gaar ah si aad ugu abuuri karto meenish kuu gaar ah fikradahan. Fikrad ahaan, haddii aad rabto inaad qeexdo murqaha oo aad ka takhalusto dufanka ku ururay jirkaaga meelaha gaarka ah, waxaad u tagtaa takhasusle ama qolka jimicsiga laftiisa, tababarayaasha ayaa kugu hagi kara go'aan qaadashada.
Ku saabsan qeexitaanka iyo cuntada, iyoWaa hawl gaabis ah oo u baahan adkeysi iyo xoog, waxaad leedahay ujeedooyin cad oo dhab ah si loo gaaro jirka aad rabto waqti macquul ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cunto si loo qeexo